Home Wararka Senatariska Fartaag & Iftaan Baasto oo iska fogeeyay in C/Karin Guled lacag...
Senatariska Fartaag & Iftaan Baasto oo iska fogeeyay in C/Karin Guled lacag siiyay, soona saaray
Senators lagu kala magacaabo Cabdullahi Shiikh Ismaacil (Fartaag) iyo Ifataan Baasto oo dhawaan laga soo doortay Jubbaland in ay wakiil uga noqdaan dowlad goboleedka Jubbaland Aqalka Sare ayaa si caro ku jirta isaga fogeeyay warar uu suuqa gashaday Cabdikarin Guuleed kaas oo uu ku sheegay in uu isaga lacag siiyay labadaas Sanataris.
Cabdirkarin Guleed ayaa u sheegay mas’uuliyiin ka tirsan Jubballand iyo siyaasiyiin kale in uu labadaas mas’uul siiyaya $100,000 xildhubaankiiba si ay ugu tartamaan kuraasta Senatiriska ee laga soo doorto Jubbaland. Arintaa ayaa ku noqotay yaab iyo amakaag labadaas mas’uul iyo hogaanka sare ee Jubbaland ayaa keentay in ay jawaab adag ka bixiyaan.
“Walaal dhagayso, ninka Cabdikarin Guuleed la yiraahdo lacagna ima siinin, waa jirtaa in uu dhowr mar talaafan igu soo waalay… laakiin wax naga dhaxeeyo oo aan ahayn aqoon guud ma jirto, xaqiiqdiina waa wax islaanimada ka fog in uu iga been abuuro aniga iyo asxaabta aan tantanka ku jirnay. In la is-ilhaanaystana maha wax fiican, gaar ah qof rajo ka qabo siyaasada Soomaaliya”, ayuu yiri Senator Farmaag oo ay ka muuqato caro.
Madaxweyne Axmad Madoobe ayaa dhankiisa yiri “Adeer ninku miyuusan diinta aqrisan, beenta intaa la eg muxuu ka helayaa”
Cabdikarin Guleed ayaa waxa uu inta badan sheegtaa in uu isagu soo saartay Senatariska uusan wax aqoon ah u lahaynin isaga oo u muuqda in uu doonayo in uu shacabka indha sarcaad ku rido. Dhaqanka Cabdikarin ee beenta ayaa ku baahay guud ahaan baraha bulshada iyada oo hada lagu sheekeysto “in uu yahay ninka ka soo shaqeeyay in cayaaryaahanka Lione Mese uu isaga mas ‘uul ka ahaa in uu ku biiro PSJ ee dalka Faransa kana so tago Barcilona ”. taas macnaheedu tahay beentiisa waxa ay gaartay meeshii ugu sareeysay